ကျွန်တော်.လိမ္မာနေဆဲပါ အဖေ..... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » အတွေးစများ » ကျွန်တော်.လိမ္မာနေဆဲပါ အဖေ.....
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 1:00 PM
Posted by မိုးသက် at 1:00 PM Read more
ဒီစာလေးက သိပ်ထိရှပါတယ် မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ ပေါင်းကူးတံတားလေးတွေပေါ့ဗျာ
မိဘတွေမျက်စိမှာ ကျနော်တို့တွေက တချိန်လုံးခလေးပိစိလေးတွေ အတောင်အလက်စုံတယ်လို့ကိုယ်က မြင်တယ် သူတို့ကတော့ သူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့မြင်တတ်တယ်။ ခင်ဗျား အဖေက သိပ်ကိုကြင်နာတတ်မယ့်လူပါပဲ အမြော်အမြင်လည်းရှိသလို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့အဖေတယောက်ဆိုတာ ကျနော် မြင်မိတယ်။ ကျနော့အဖေလည်း အဲ့လိုဆုံးမစာတွေ အမြဲပြောရေးပေးတတ်တယ်။ မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်ပါဗျာ.....
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 24, 2012 at 12:39 AM
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး January 24, 2012 at 1:49 AM
Candy January 24, 2012 at 6:41 AM
မိဘနဲ့ သားသမီးမေတ္တာလေးကို အထင်းသားမြင်ရတယ် :D
Whatabeautiful connection between father and son!
အဖေ့ခြေထောက်ပြေးဖက်ပြီး သားကိုချစ်ရင် ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့တော့ ဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့ မျက်ရည်ဝဲသွားတယ်...
မောင်မောင် February 5, 2012 at 11:42 AM
ကောင်းလိုက်တဲ. ဆုံးမစာလေးဘဲ ငါ.ညီ အဲ.အတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်
May Khin October 4, 2012 at 5:48 AM